साँच्चै ! ठूला डाँका महलमा बस्छन् कि जङ्गलमा ? « Khabarhub
साँच्चै ! ठूला डाँका महलमा बस्छन् कि जङ्गलमा ?
सन् ८० को दशकको मध्यमा भारतीय फोटोग्राफर प्रशान्त पञ्जियारले भारतका कुख्यात डाँकाहरूको बसोबास क्षेत्र मानिएका डरलाग्दा स्थानमा धेरै समय बिताए । यसै क्रममा उनले त्यहाँका थुप्रै तस्बिर पनि लिए ।
यस्ता धेरै डाँकाहरू मध्यप्रदेशको चम्बल क्षेत्रमा बसोबास गर्थे । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार पाउल कासोलपेकका अनुसार त्यस क्षेत्रबाट सञ्चालित समूहले गर्ने लुटपाट र हत्याजस्ता गतिविधि सामान्य झैँ थिए ।
सन् १९८२ को मेमा लामो प्रयासपछि प्रशान्त र उनका दुई साथीले चम्बलमा ‘बान्डिट किङ’ भनिने मल्खान सिंहलाई भेटे । उत्तर प्रदेशको क्षेत्रमा उनीहरूले दण्डहीनता मच्चाइरहेका थिए ।
यसको एक वर्षअघि मात्र आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भनेर फलुनदेवीले २२ जनालाई एकै पटक मारेकी थिइन् ।
चम्बलमा रहेका मल्खान सिंह र उनको ग्याङ त्यो समयमा धेरै डराएको थियो । कहिले नाङ्गै गोडाले या कहिले चप्पल लगाएर हिँड्न रुचाउने उनीहरूले खोलाको तीरमा आफ्नो वासस्थान बनाएका थिए ।
तेह्र वर्षको डकैती कालमा मल्खानले कति पटक त एकै ठाउँमा सय जना जम्मा गरेर बुटले बजारे । सन् १९८२ मा प्रहरीले यो ग्याङविरुद्ध डकैती, अपहरण र हत्याका ९४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशासनले मल्खानको टाउकाको मूल्य ७० हजार रुपैयाँ राखेको थियो । अहिलेको बजारमा यो मूल्य कम मानिएला तर त्यो समयको भारतीय बजारमा निकै ठूलो थियो ।
सन् १९८२ मा प्रशान्त तथा उनका साथीहरू कल्याण मुखर्जी र बृजल सिंहले मध्यप्रदेशको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका प्रतिनिधि र ग्याङ सदस्यबीच आत्मसमर्पणका लागि वार्ता भइरहेको समयमा भेटेका थिए ।
‘उनीहरूलाई अप्ठेरो हुने गरी प्रकाशित नगर्ने शर्तमा विश्वसनीयतासहित म फोटो खिच्न सफल भएको थिएँ,’ सो समयको आफ्नो कामको बारेमा प्रशान्तले भनेका छन् ।
त्यति बेला मल्खान सिंह अग्ला र सुन्दर युवा थिए, प्रहरीको जस्तो लुगा लगाएका, समाजले खोजेको एउटा नायकजस्तै देखिने । प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेर सार्वजनिक हुँदा ३० हजार मानिसले ताली बजाएर उनको स्वागत गरेका थिए ।
प्रशान्तले त्यो समय खासै कोहीसँग नखुल्ने र अमेरिकामा निर्मित आफैँ लोड हुने राइफल बोक्ने ती अग्ला व्यक्तिलाई अहिले पनि सम्झिरहेका छन् । प्रशान्तका अनुसार ‘ती व्यक्ति कम बोल्ने र इगो राख्ने तर अरूलाई सम्मान गर्ने’ स्वभावका थिए ।
त्यस ग्याङमा रहेकाहरू रातको समयमा एकै हुला बाँधेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गरेका थिए । सुत्ने ओछ्यान, हतियार र वर्षातबाट बच्ने लगायतका सामग्री बोकेर हिँड्ने गरेका थिए ।
एक समूहमा एक जनाले एके ४७ बोक्थे भने अन्यले राइफल र कार्बिन बोक्ने गरेका थिए ।
प्रशान्तका अनुसार मल्खान चम्बलको सामाजिक संरचनाको प्रतिनिधित्व थिए । माथिल्लो जातका भनिनेहरूले गर्ने भेदभावविरुद्धमा प्रतिकार गर्दै आत्मसम्मानको खोजी गर्ने तल्लो तल्लो जाति भनिनेहरूको विद्रोहको स्वरूप नै मल्खान सिंह थिए ।
प्रशान्तले दुर्लभ लाग्ने त्यो तस्बिर लिन आफ्नो पेन ट्याक्स प्रयोग गरे, निक्सन क्यामरा भाडामा लिएका थिए ।
त्यसै वर्षको जुनमा हजारौँ जनाको उपस्थितिमा मल्खानले आत्मसमर्पण गरेका थिए । ग्याङको कुनै पनि सदस्यलाई मृत्युदण्ड नदिने सर्तमा आत्मसमर्पण भएको थियो ।
त्यति बेला मल्खान सिंह अग्ला र सुन्दर युवक थिए; प्रहरीको जस्तो लुगा लगाएका, समाजले खोजेको एउटा नायकजस्तै देखिने । प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेर सार्वजनिक हुँदा ३० हजार जनाले ताली बजाएर उनको स्वागत गरेका थिए ।
मल्खान सार्वजनिक भएसँगै धेरै सञ्चारकर्मीले तपाईंलाई कस्तो लागेको छ भनेर सोधेका थिए । मल्खान यस्तै प्रश्न प्रशान्तलाई गर्थे । यिनै मल्खानसहित उनको समूहका धेरैले काराबास भोगेका छन् । काराबास पूरा गरेर मल्खान राजनीतिमा छन् । उमेरले करिब उत्तराद्र्धका, ७८ वर्षीय, मल्खान सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय छन् ।
विगत स्मरण गर्दै मल्खान भन्छन्, ‘म डाँका होइन, विद्रोही थिएँ । साँचो डाँकासँग कसरी मुकाबिला गर्ने त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’
मल्खानजस्तै सनसनीपूर्ण डाँकाका रूपमा सन् ८० को दशकमा भारतमा चिनिएकी थिइन् फुलनदेवी । गरिब परिवारमा जन्मेकी, बाल्यकालमै बिहे भएकी र आफ्नै श्रीमानबाट कैयौँ पटक बलात्कृत भएकी फुलनदेवीको पीडा यतिमा सकिएन ।
श्रीमानको यौन उत्पीडनका कारण फुलनदेवी फेरि माइत फर्किन् । फुलनदेवीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा श्रीमानलाई अत्यन्तै खराब व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
उनले घरबाट भागेर ग्याङ निर्माण गरिन् । त्यसै ग्याङमा एक जनासँग प्रेममा पनि परिन् । ग्याङमा भएको झगडामा उनका प्रेमी विक्रम मलाह मारिए, फुलनदेवी बन्धक बनाइइन् । त्यो समयमा उनी बारम्बार बलात्कारमा परिन् ।
त्यहाँबाट छुटकारा पाउने बित्तिकै फुलनदेवीले नयाँ ग्याङ बनाइन् । यसपछि उनले अर्को युवकसँग प्रेम गरिन् । अनि आफूलाई अन्याय गर्नेसँग बदला लिने क्रममा एकै पटक २२ जनाको ज्यान लिइन् ।
दुई वर्ष डकैतीमा संलग्न रहेर फुलनदेवीले सन् १९८३ मा आत्मसमर्पण गरिन् । आत्मसमर्पण गर्दा उनीमाथि अपहरण, डकैती र चन्दा सङ्कलन लगायत ४८ वटा मुद्दा लगाइएका थिए ।
यिनै मुद्दामा फुनदेवी ११ वर्ष जेल बसिन् । उनले २२ जनाको हत्या गरेको घटनालाई सञ्चारमाध्यम र नागरिक समुदायले उनको साहसका रूपमा व्याख्या गरे ।
सन् १९९४ मा समाजवादी पार्टीका मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको समयमा फुलनदेवीले बाँकी सजाय माफी पाइन् र जेलमुक्त भइन् । यसपछि उनी लगातार दुई पटक समाजवादी पार्टीबाट सांसदमा निर्वाचित भइन् ।
सन् २००१ मा सांसद रहेकै समयमा सेर सिंह राना नामका व्यक्तिले फुनलदेवीको सरकारी निवासको ढोकैमा उनीमाथि गोली प्रहार गरेर हत्या गरे । सेरसिंहका आफन्तलाई फुलनदेवीको ग्याङले बहमाइ भन्ने ठाउँमा मारेको थियो ।
सन् १९९४ फलुनदेवीको त्यो समयसम्मको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘बेन्डीथ क्विन’ रिलिज भएको थियो जो भारतीय बजारमा अत्यन्त चर्तित भएको थियो ।
यस्ता अन्य धेरै उदाहरण भारतमा पाउन सकिन्छ । यस्तो समस्या भारतको उत्तर प्रदेशमा बढी छ । खराब आर्थिक र सामाजिक अवस्था रहेको उत्तर प्रदेश राज्यले डाँका भनेका धेरै व्यक्तिलाई आममानिसले सामान्य व्यक्तिका रूपमा चिन्थे ।
उत्तर प्रदेशको जलाऊ जिल्लामा जन्मिएकी फुलनदेवी आमाबाबुका चार सन्तानमध्ये कान्छी थिइन् । संयोगवश उनी र उनकी एक दिदीमात्र वयस्क हुँदासम्म बाँचे ।
घरको सम्पत्तिको विषयमा पहिलोपटक पारिवारमा धर्ना दिन खोज्दा फुलनदेवीले नातामा दाजु पर्नेबाट पिटाइ खाएकी थिइन् । यो घटना हुँदा उनी ११ वर्ष उमेरकी थिइन् । यसको केही दिनपछि पटैयालाल मलाहासँग उनको बिहे भएको थियो ।
फुलनदेवी एक दिन भागेर माइत गइन् । यसपछि श्रीमानले नै चोरीको आरोप लगाएका थिए । यसै कारण उनी जेलमा पुगेकी थिइन् । जेलबाट निस्किएर माइतमै बसेकी थिइन् अनि १६ वर्ष उमेर पुगेपछि माइतीकै प्रयासमा श्रीमानको घर फर्काइइन् ।
फुलनदेवी पहिलो पटक ग्याङमा आबद्ध हुनुको कारण भने अस्पष्ट नै छ । कतिपयले उनलाई अपहरण गरेर ग्याङमा आबद्ध गराइएको अनुमान गरेका छन्, कतिपयले उनी आफँै घरबाट भागेर ग्याङमा गएको भनेका छन् । उनको आत्मवृत्तान्त ‘किस्मतका यही मन्जुर था’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् ।
बहमाई गाउँका ठाकुर खानदानका ठालुहरूबाट बलात्कृत भएपछि उनको जीवनमा नयाँ परिवर्तन देखिएको हो । बहमाईमा आफूजस्तै तल्लो जात भनिएका विक्रमको ग्याङका मान सिंह मलाहाको सहयोगमा उनी छुटिन् । यसपछि मानसिंह र फुलनदेवीको ग्याङले भारतमा एक पटक धेरै चर्चा पायो ।
कुनै समयमा भारतका चर्चित धावक पानसिंह टोमार आफूमाथि अन्याय भएको ठहर गर्दै डकैतीमा संलग्न भए । उनलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मा¥यो । त्यसो त डाँकु पान सिंहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू सञ्चार माध्यमले व्याख्या गरेअनुसार र राज्यपक्षले प्रस्तुत गरेअनुसार उनी खराब नभएको टिप्पणी गर्छन् ।
भारतमा मल्खान सिंह र फलुनदेवी डाँकाभन्दा नायकको कोटीमा चिनिने गरेका छन् ।
मल्खान सिंहले भनेजस्तै दक्षिण एसियाली देशमा रहेको यो सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा ठूलो डाँका को हो भन्ने प्रश्न शायद सधैँ उठ्ने गरेको छ । अनि मल्खानले भने जस्तै जङ्गलमा रहनेहरू भन्दा ठूला डाँका महलमै हुन सक्छन् जसले मल्खान, फुलनदेवी र पानसिंह लगायत धेरैलाई डाँका बनाए ।
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७८, शनिबार ९ : ०० बजे